Zim inokutendera kuti iwe ugadzire Wiki pane yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Zim chishandiso chine simba kubata ruzivo uye kugadzira wiki. Kugadzira wiki hakungonakidze chete mageek, asiwo kune avo vakagadzira chero rudzi rwechirongwa, vachikubvumidza kuti uzvinyore uye upe ruzivo kune vese vateveri vako, vatengi kana vashandisi. Zvakanaka, ndizvo zvinoita Zim kuti zvive nyore kwauri, uine rako wiki rakagadzirwa kubva pakutanga uye richikubvumidza iwe kuti utonge zvese zvirimo, pamwe nekugona kuzviisa pane webhusaiti kana kuisiya munzvimbo.
Kana iwe uchida kuwana Zim, Unogona kuikanda kubva ku zviri pamutemo webhusaiti ye software iyi, kunyangwe ichiwanikwawo mune yakawanda yekuchengetera, saka iwe uchaiwana zvechokwadi uchishandisa yako package package mune yaunofarira kugovera kuiisa nenzira yakasununguka. Kumufaro wevakawanda, kana uchinge waiswa iwe unozokwanisa kuzvitanga neyakareruka uye yakajeka graphical interface, pasina kumhanya nemirairo uye kushanda kubva kuchiteshi.
Chinhu chekutanga icho chichatibvunza isu kupinda iyo zita rechirongwa uye dhairekitori kwarinenge richichengeterwa. Kana tangova nazvo, tinoratidzwa kuti peji rekutanga reWiki redu raizotaridzika sei, nemenu yezvishandiso kuunza mapeji matsva uye nekuwedzera zvemukati (zvinyorwa nemifananidzo, zvinongedzo, ...) nenzira yakapusa, tisingazive chirongwa kana chero chinhu.chitaera. Iwe zvakare uchawana akasiyana mafomati kusiyanisa pakati pemusoro wenyaya, mabara uye akaverengeka zvinyorwa, zvinyorwa, nezvimwe.
Zim inovimba nemarkup yainoshandisa DokuWiki, chaizvo WikiText nemamwe misiyano, saka kana usinga fambe zvakanaka nemifananidzo yekushandisa, unogona zvakare kuisa zvemukati uchishandisa mitauro iyi. Zvakanaka, kana uchinge uine yako wiki, unogona kutumira mhedzisiro kuHTML, Latex, nezvimwe. Ukazviita muHTML unenge uine wiki yakagadzirira kuturika pawebhusaiti. Zviri nyore handizvo? Zvakanaka ndizvo izvo Zim inogona kutiitira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Zim inokutendera kuti iwe ugadzire Wiki pane yako GNU / Linux distro
Kuisirwa kwenzvimbo dzekutanga uye vhidhiyo madhiraivha muArch Linux
ChromeOS ichaenderana neGnu / Linux application